Madaxweyne Farmaajo “Siciid Deni dhawr jeer baan kucasunay caasumadda dalka, oo aan niri noo imaw hana dulmarine”
February 12, 2020 NEWS 2
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wareysi gaar ah siiyey TV-ga Universal ayaa sheegay in ay marar badan ku casuntay dawladda Faderaalka magaalada Muqdisho, Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, si looga tashato arrimaha siyaasadda ee dalka iyo xariirka dawlad gobaleedyada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in aysan dawladda Faderaalka dooneyn oo aysan marnaba aqbali doonin in dawladdo Shisheeye oo dano kaleh arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya ay isticmaalaan dawlad gobaleedyada dalka, taasna ay sharaf darro ku tahay qofka Soomaaliga ah ee la adeegsanayo.
Madaxweynaha ayaa iska diiday eedaha uga imaanaya dawlad gobaleedyada Jubbaland & Puntland, wuxuuna sheegay in ay casumeen madaxweynaha Puntland balse uu mar kasta meel kale xooga saarayey.
Farmaajo ayaa sheegay in ay aaminsan tahay dawladiisu wadatashi iyo wax kasta lagu dhameyo sida ugu wanaagsan, halka uu sheegay in aysan marnaba aqbaleyn in Qaranimada dalka lagu sifeeyo faragalin dalal Shisheeye ka imaanaysa.
Hadalka, Madaxweyne Farmaajo ayaa kusoo beegmaya xili Siciid Deni uu sheegay in aan isaga laguba casumin Muqdisho oo aan marnaba dawladda Faderaalku diyaar u aheyn in siyaasadeeda qeyb kagaliso dawlad gobaleedka Puntland.
Masha aalah Md Saciid dani, waxa uu ka diiday Farmaajo iyo kheyre inay laaluush siiyaan, si adanahooda dal uga fushadaan, lkn md Dani waxa uu u sheegay in loo baahan yahay, in lagu wada hadlo meel fagaare (live) ah oo soomaali oo dhan u jeedo laguna garnaqsado, lkn Md Farmaajo iyo kheyre taas ma ogola, Md Dani laaluush iyo musuqmaasuq ma ogala. Md Dani si daacad ah buu raba in loo xisaabtamo.
Xarmaajo isaga weye midka dowlada dhisheeye usoo adeegsadaan burburinta delka waxaana csdayn u ah dhibaatadii ka dhacay Baydhabo ee dad badan lagu laayay lagunasoo xiray Mukhtaar raabow issgoo adeegsaday Ethiopian. Waxaa kale oo uu adeegsaday Farmaajo ciidan Ethiopian ah si uu khal khal u geliyo doorashadii Kismayo iyo tii Galmudug. Hada oo la joogo ayuu adeegsanaa oo Gedo ku qabsaday awood Ethiopian. Marka Farmaajo waa tuug beenlow ah. Tan kale Madaxwayne Deni maba ahan inuu la kulmo shaqsi ku tuntay dastuurkii dalka oo u dhaqmaya dictator balse awoodiisa aan arag.